Zoly le Zébu - La ferme malgache
« Avec du courage on vient à bout de tout. »
Lilo le petit bouvier est triste. Presque tous ses amis vont à l’école, mais pas lui… Ses parents ne peuvent pas payer l’école, et puis il doit garder le troupeau.
Mais Zoly est un zébu futé…
Zoly le zébu, version malgache
Zoly, ilay omby
Mitazana ny vohitra i Lilo, ilay mpiandry omby kely avy aty Afovoan-Tany. Tsy misy tadidiny afa-tsy ilay izy teo, mipetraka eo amoron-dalana, na izy tery, lavidavitra kokoa, miankina amin’ilay kininina avo be mahafinaritra azy indrindra toa miezaka manaka-danitra. Efa ela anie izay niandrasany ny andian’ombin’ny dadany izay ! Fantany tsara ny bibiny, omby enina malai-mihetsika, asaina mitarika sarety indraindray, ziogaina tsiroaroa. Tian’ i Lilo ny mandroaka sarety. Tian’i Lilo ny mijery ny omby mirao-bilona ringidringitra. Tian’ i Lilo ny tontolo manodidina azy, fa ny tena tian’ i Lilo indrindra dia ny mianatra mamaky teny satria tsy mbola nandia varavaran-tsekoly mihitsy izy.
Fa androany izao dia malahelo i Lilo. Aposany amin’i Lova, sakaizany hatramin’ny ela izay nandalo teo handeha hianatra, ny ao am-pony :
– Lova, mijanona kely vetivety, leitsy, hiresaka amiko a ! Mangingina aho !
– Tsy afaka aho, ry Lilo a ! Maika hianatra aho !
– Mba te hiaraka amin’ialahy mafy aho, leitsy : ento any am-pianaranareo aho !
– Ialahy anie tsy voasoratra anarana ao e ! Iza no handoa ny saram-pianarana ?
Nangina I Lilo raha nandre izany, ary mainka koa nitombo ny alahelony. Nanganohano ny ranomasony. Saika mandeha mianatra daholo ny namany rehetra ao an-tanàna, fa izy irery no miandry ny ombin-drainy ka tsy manam-potoana handehanana mianatra. Tsy ny faniriany hianatra anefa no tsy misy. Henony tsara ny namany mitanisa ny teny ao amin’ny abidia-A, B, D, E….sy mamerina mitantara angano. Ny sasany aza misy maneso azy : ”Lilo tsy mahay mamaky teny! Tsy fantany hoe aiza ny M ! Tsy fantany ny S ! Kamolahy i Lilo !”
Nitomany I Lilo rehefa nibanjina ilay vohitra nomen’ny masoandro vao miposaka lokom-bolamena. Ny namany mankany an-tsekoly, fa izy kosa, mitoretra eo amoron-dalana. Tamin’izay fotoana izay ilay antitra indrindra tamin’ny ombiny izay nataony hoe Zoly no nitodika tany aminy ka niteny hoe :
- Aza mitomany leitsy ry Lilo a ! Ndao fa izaho no hampianatra anao ny alfabeta !
Gaga be i Lilo noheveriny fa hoe nisy olona niafiana tao am-bodihazo tao ary nananihany azy. Notadiaviny hoe avy aiza marina ilay feo.
Mbola namerina indray i Zoly :
- Jereo aho ry Lilo a ! Mbola hampianariko manisa koa ianao !
Nodinihin’i Lilo tsara ilay omby izay mihatokatoka ohatra ny mahalala zavatra.
- Zoly, ianao ve izany miteny amiko izany?
- Ie ! Izaho ! Tsapako tsara ny alahelonao. Hitako daholo ny ranomaso narotsakao. Rariny loatra ny fanirianao ho any an-tsekoly. Raha tianao dia aoka izaho no ho mpampianatra anao.
- Ie ! Ie ! Tena hevitra tsara izany! Fa mba mahay mamaky teny ve anefa aloha ianao ?
- Mazava loatra ! Mahay aho ! Mahay manoratra koa aza aho ! Haiko tsianjery ny alfabeta, ary afaka manisa hatrany amin’ny an-tapitsisany maro tsy mandiso aho.
Variana I Lilo : omby manam-pahaizana! Avy hatrany izy dia roso nianatra.
- Eny àry ! Ampianaro manoratra ny anarako àry aho, ry Zoly.
- Tsy misy mora ohatra an’izany! Alaivo itsy rantsan-kazo itsy, iny, dia jereo tsara aho!
Nalain’I Lilo ilay rantsan-kazo natoron’I Zoly azy, I Zoly kosa naka anankiray hafa natevintevina kokoa tamin’ny vavany ary nanomboka nanoratra tamin’ny tany : L- I- L – O
Niondrika I Lilo dia nandinika tsara. Nitingintingina izy, nifantoka tsara dia mba nanoratra koa teo aminy tany feno vovoka L – I - L – O. Tsy dia nahomby loatra ilay nataony voalohany. Ohatra ny farango kely manidina ny L, ny I ohatra ireny hazo nadaboky ny rivotra ireny, ny O ohatra ny rano mihandrona malai-mihetsika.
- Avereno ! Hoy ny baikon’i Zoly
Nofafan’i Lilo tamin’ny faladiany ilay izy dia naveriny ary nitandrina fatratra izy. Efa netinety kokoa ilay faharoa.
- Mbola haverinao matetika foana io raha ilaina. Ny mianatra mamaky sy manoratra ary manisa dia mianatra hitozo ihany koa.
Tamin’io andro io dia efa ho impolo kely i Lilo no namerimberina nanoratra ny anarany, dia nihakinga tsikelikely ny tanany ary tsapany ho nihamaivana ny fony. Dia nahazo laka tsikelikely tao anatiny ny fanantenana. Lasa hadinony hatramin’ny nandroaka ny omby hikisaka ery lavidavitra kokoa be ahitra vao mitsiry.
Rehefa nadiva hilentika ny masoandro dia niverina avy any an-tsekoly i Lova ary nahita an’I Lilo miondrika amin’ny tany mitana ilay rantsan-kazo :
- Inona ity ataon’ilalahy ? Manao sary ?
- Ie!ataoko sary ny anarako !
- Asehoy hoe !
Dia hitan’i Lova fa norakofan’I Lilo ny anarany avokoa izay lalana rehetra nolalovany niaraka tamin’ny ombiny tamin’io andro io. Lilo- Lilo- Lilo: isaky ny indray mandigana dia misy ny anarany, misoratra eo amin’ny lalana feno vovoka mena dorehitra. Gaga i Lova :
- Fa iza no nampianatra an’ialahy ? Ahoana no nahaizan’ialahy manoratra ny anaran’ialahy nefa vao io maraina io mbola tsy nisy na inona na inona hain’ialahy ?
Dia nojeren’i Lilo tamin’ny maso mody tsy taitra izy :
- Tsiambarateloko izany. Tsy lazalazaiko an’iza na iza.
Lasa vinany i Lova. Hoy ny eritreriny : ”Nisy olona nandalo teto dia niantra azy. Izao izy dia miseho ho mahay manoratra amiko eo !” dia nanaovany fanamby i Lilo :
- Raha manoratra àry ialahy dia mba soraty koa ny anarako e !
Tsy rototra akory I Lilo ary namaly hoe:
- Mitodiha ary ialahy fa hosoratako ny anaran’ialahy, raha jeren’ialahy aho mantsy dia tsy mety hivoaka ny tanako ny soratra !
Hitan’I Lova ihany fa hafahafa ilay izy nefa nekeny ny filam-baniny nataon’ity namany satria nohajainy izy ary ny hahasoa azy ihany no notadiaviny. Dia nitodika tany amin’ilay vatan-kininina izy sady nakimpiny ny masony, ohatra ireny ilay manao fangalapiery ireny.
- Manisa folo aho dia jereko amin’izay ialahy, hoy izy nampilaza.
Nanao pihi-maso tamin’I Lilo i Zoly, ilay omby. Efa nanjary mpiray tsikombakomba izy roalahy nanomboka izao. Ny an’i Zoly mbola teny am-bavany ilay rantsan-kazo ka nataony haingana ilay modely ary kinga ery i Lilo naka tahaka an’ilay izy. 1 – 2 – 3 ….Mbola tsy tapitra nanisa akory i Lova dia efa niantso i Lilo
- Vita! Afaka mijery amin’izay ialahy !
Voatery niaiky i Lova fa tena afaka nanoratra tokoa i Lilo. Mahitsy tsara ny L, tena mihevaheva tsara eo amoron’ilay tanimbary natao solon-tsolaitra. Ny O kosa nampiseho tsara ny mahaboribory azy, ny V indray lasa nioty vonin’avoko vitsivitsy tahaka ny ao anaty vazy. Ary farany, ny A dia mijaridina tsara amin’ny tongony roa tahaka ireny rapeto tsy misy lohany ireny.
- Tena mety leitsy ry Lilo ! Arahabaina ialahy !
- Rahampitso hariva, rehefa miverina avy any an-tsekoly ialahy dia ho haiko koa ny manoratra ny anaran’i “Zoly”, namako
- Fa iza izany Zoly izany fa tsy fantatro? Azon’ialahy ampahafantarina ahy ve ?
Nivoaramena i Lilo, saika tratra ny kary nafenina, saingy namboariny haingana ny resaka mba tsy ho fantatra ny tsiambaratelony: iza koa no hino fa hoe miteny ny ombiny !!
- I Zoly dia namako miaraka amiko ety ary izy no mampianatra ahy manoratra. Izay ihany no azoko ambara an’ialahy !
Mainka koa i Lova liana ka te hahalala ny marina.
- Naman’ialahy ahoana àry ? Fantatro ve izy izany ?
Mody adala i Lilo sady namaly :
- Tena fantatr’ialahy tsara izy ! Mandalo eo anoloany foana ialahy isan’andro ! Ngeza be izy, mahery, malemy paika ary tena manja amin’ny lafiny iray.
Dia tapa-kevitra i Lova fa hiandry ny ampitso vao hanamarina ny tenin’i Lilo.
Ny ampitson’iny, ilay masoandro malala-tanana vao zara raha mandoko ny tendron’ny vohitra, dia iny sahady eny i Lilo fa eny am-perinasa. Maika hianatra teny vaovao izy. I Zoly koa efa vonona. Misy rantsankazo eny am-bavany, dia manoratra eo amin’ny lalana izy : Z –O – L – Y. Mahafatifaty ery ireto soratra nokikisana amin’ny tany! Faly ery i Lilo ka ohatra ny hitany mandihy afindrafindrao ry zareo. Nampitomboiny ny fikirizany sy ny fikaliany: anio kosa dia ny hahomby avy hatrany no faniriany.. Dia tena fahombiazana tokoa! Tsy mihambahamba sy mangovitra intsony ny tanany manoratra.Tsy misy atahorany intsony. Fantany tsara koa fa iI Zoly, ilay omby, dia hampianatra azy izay rehetra tokony ho fantany hitondrany ny fiainany amin’ny maha zazalahy azy aloha, dia amin’ny maha tovolahy azy dia amin’ny maha lehilahy lehibe azy.
Nony hariva, rehefa hitan’I Lova fa tena tsara soratra tokoa i Lilo dia tsy nitady izay hahalalana ny tsiambaratelony intsony izy. Isan’andro isan’andro dia mahavita fandrosoana goavana i Lilo. Niampy tsirairay teo ny soratra dia lasa teny tsara tarehy. Volana vitsivitsy taty aoriana, rehefa avy nikokotra mafy isan’andro i Lilo dia tsy hoe nahay nanoratra fotsiny fa lasa nahay namaky teny tsara koa, satria nisahirana mihitsy i Zoly nanoratra ireny tam-paharetana teo amin’ny tany.
Izany no nahatonga an’i Zoly, ilay omby manan-tsaina, nirotsaka ho mpampianatra an’i Lilo, ilay mpiandry omby kely, rehefa nahita ny hakiviany. Nampianariny azy daholo izay rehetra tokony ho hain’ny lahikely. Ny naman’i Lilo no nanao ny ambiny : rehefa avy mianatra ry zareo dia lasa fahazarany ny mijanona eo amin’I Lilo mba hampianatra azy ny hira vao avy nampianarina azy ireo tany an-tsekoly. Nanjary lasa mpampianatra kely tsara fanahy tamin’i Lilo daholo ny namany ary nizara ny haren-tsainy rehetra tamin’ilay niangaran’ny vintana tsy mba tafiditra an-tsekoly. Nety sy nahomby tokoa ny nataony, hany ka rehefa lehibe i Lilo dia tonga mpampianatra. Ivelan’ny ora fampianarany, noho izy nahatsiaro ny fahazazany, dia lasa izy mizara am-pitiavana ny fahaizany amin’ny lahikely mpiandry omby tsy tafiditra an-tsekoly taty Afovoan-tany. Betsaka amin’izy ireny ankehitriny no mahay mamaky teny sy manoratra, tsy misy sahy tsy hampiditra ny taranany an-tsekoly ! Rehefa nifampikasokasoka tamin’i Lilo mantsy ry zareo dia nahalala fa misy fotoanany ny zava-drehetra eo amin’ny fiainana, misy ny fotoana hianarana ary misy ny fotoana hiandrasana omby…
© La Ferme malgache